Gali Wakiilka Caalamiga ah LMDE Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Ku dhig Wakiilka Caalamiga ah LMDE Xfce
Kuweena adeegsadayaasha ah Xfce waan ognahay tan fiican iyo tan yar Deegaanka Desktop ma haysto ikhtiyaar la mid ah kan walaalkiis ka weyn Gnome, in la dhigo a Global wakiil nidaamka.
Tani waxay keenaysaa taas haddii aan isticmaalno chromium (kaas oo adeegsanaya wakiilka Gnome) Waa inaan gacanta ku caddee waa maxay wakiilka loo adeegsanayo Xfce. Hagaag, waxaan horeyba uhelay xalka arintan waana tan soosocota.
Marka hore waxaan tafatirnaa feylka / iwm / deegaan oo waxaan ku dhejinay gudaha:
Halkee 10.10.0.5 waa IP-ka wakiilka wakiil. Waxaan keydinaa oo aan tafatirnaa feylka / iwm / astaan oo waxaan ku riday dhamaadka:
Waxaan dib u bilaabi doonnaa qalabka oo hadda waxaan kula socon karnaa chromium (tusaale ahaan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku dhig Wakiilka Caalamiga ah LMDE Xfce
Elav iyo tan sidoo kale waxay u shaqaysaa Gnome? Waxaan rabay inaan barto sida loo isticmaalo wakiil, laakiin waxaan ahay isticmaale aasaasi ah
Ku jawaab sangener
Inkasta oo Gnome uu leeyahay maareeye u gaar ah Global Proxy, haa, waa iska cadahay inay tahay inuu shaqeeyo maxaa yeelay doorsoomayaasha waxaa lagu cadeeyay feylasha saameeya nidaamka oo dhan ...
Mahadsanid elav waan isku dayi doonaa
Waxaan qabaa laba shaki oo laga yaabo inaan cadeeyo anigoo fiirinaya barta waxyar ka badan, laakiin halkan ayaan kaga tagayaa. Ujeedkeygu waa:
1-isticmaal Turpial gadaashiisa wakiilka, 2-laakiin wakiilku wuxuu leeyahay xaqiijin….
Ma noqon kartaa wax sidan oo kale ah:
Ahhh, oo ku taal Gnome
Dhab ahaan Nelson. Aragti ahaan waa inay u shaqeysaa sidaas.
Su'aal, sideen ku dari karaa waxyaabo ka reeban, tusaale waxaan rabaa inaan ka reebo noocyo badan oo IP ah oo aan tayda ahayn, tusaale 10.13.xx.xx Waxaan rabaa inaan ka saaro IP-yadaas, sida magac * .company. * ………?
Maqaal aad u fiican (sida kuwa aan uga baranay FromLinux)
Waxaan u maleynayaa inaan ku daabici doono meelo kale (dabcan, aqoonsashada ilaha)
Waxaan ka shaqeeyaa shirkad aan ku leenahay wax soo saar wakiil wakiilka mararka qaarna waxaan u baahanahay inaan dejiyo wakiil "otomaatig ah" iyo waqtiyo kale oo aan ku maro mid gaar ah. Suurtagal ma tahay in la beddelo wakiilka iyada oo aan dib loo bilaabin / laga bixin kombiyuutarka?
Ubuntu 12.04 waxaa loogu yeeri doonaa ...
Sababtoo ah wax walbaa ma aha Firefox, Thunderbird 7 sidoo kale annaga ayaa nala socda